Firaisankinan’i Pôrtô Rikana, Namiratra ao Anatin’ny Fahatapahan-Jiro Manerana Ny Tangoro-Nosy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2016 7:46 GMT
Mpiasa avy ao amin'ny Fahefana misahana ny Herinaratra ao Pôrtô Rikô (PREPA) ao amin'ny toby mpamelona herinaratra Aguirre akaikin'ny morontsiraka atsimo-atsinanan'i Pôrtô Rikô nandritra ny fahatapahan-jiro namely ny nosy rehetra tao Pôrô Rikô tamin'ny Alarobia 21 Septambra. Pikantsary tamin'ny video.
Somary miha-miverina amin'ny laoniny ihany ny toe-draharaha ao Pôrtô Rikô taorian'ny fahatapahan-jiro tamin'ny tolakandron'ny 21 Septambra izay saika namely ny vondronosy manontolo nandritra ny telo andro, na dia niverina ela kokoa taty aoriana aza izany ho an'ny olona sasany. Na dia ny kaominin'ny nosy ao Vieques sy Culebra kosa aza tsy afa-bela amin'ny fiantraikan'ny fahatapahan-jiro, na apagón amin'ny teny espaniola.
Nandritra ny fahatapahan-jiro, somary nisosa tsara ihany ny zava-drehetra na dia teo aza ny tsy fisiana saika manontolo amin'ny filàna fototra. Tsy nisy ny fandrobàna ary tsy nisy ny herisetra nandritra ny fahatapahan-jiro. Satria tsy mandeha ny jiron'ny fifamoivoizana, mamitaka ny lalana (jereo ny lahatsary eto ambany), saingy tsy nisy ny tatitra lozam-pifamoivoizana goavana. Mandamina ny fifamoivoizana kosa ny polisy eny amin'ny sampanan-dalana be mpivezivezy indrindra, ka nahavaha olona be dia be izany.
Tsy nampijanona ny fankalazana ny Grito de Lares (ny Tomanin'i Lares) tamin'ny 23 Septambra, andro manamarika ny hetsika mpitady fahaleovantenan'i Pôrtô Rikô tamin'ny taonjato faha-19 izay nanomboka ny fikomiana manohitra ny governemanta Espaniola tao amin'ny tanàna tendrombohitr'i Lares tamin'ny taona 1868 ihany koa izany. Tamin'izany fotoana izany, nihay hina niaraka tamin'ny Kiobàna mitolona ho amin'ny fahaleovantenan'izy ireo manokana ireo Pôrtô Rikana mpitolona ho amin'ny fahafahana.
Mamely ihany koa ny fahatapahan-jiro tao Pôrtô Rikô, faritany Amerikana manana zon'olom-pirenena voafetra, raha mbola rangitra tamin'ny fanapahan-kevitra vao haingana noraisin'ny governemantan'i Etazonia hampihena ny fizakan-tenany. Ny tena hevi-dehiben'ny apagón dia azo antoka fa voazavan'i Maritza Stanchich, mpampianatra teny Anglisy ao amin'ny Anjerimanontolon'i Pôtô Rikô ao Rio Piedras, izay nanoratra fomba fijery azo tsapain-tanana tao amin'ny Huffington Post: